घर नजिकै शा’रीरिक स’म्पर्क गरिरहेका बेला दाजुले बहिनीलाई देखेपछि…! «
घर नजिकै शा’रीरिक स’म्पर्क गरिरहेका बेला दाजुले बहिनीलाई देखेपछि…!
Published : 18 January, 2020 10:58 pm
प्रहरीले घटनामा संलग्न यमकुमारसँगै उनका साथीहरु दीपेन्द्र महतो, वनोद महतो र विजय महतोलाई पनि पक्राउ गरेको छ । यमकुमारकी बहिनी र मृ तक अविनाशबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । आफूहरु रातिको समयमा घर नजिकै शा रीरिक स म्पर्क गरिरहेका बेला दाजुले देखेपछि कु टेर अविनाशको अ त्या भएको बयान युवतीले दिएकी छन् ।
साथीहरु धन बहादुर महतो, सुकराम महतो र अविनाश गरी ४ जना नयाँ पटिहानी चोकको ग्रिन चिल्ली रेस्टुरेन्टमा बसेर २ वटा बि यर र १ प्लेट सुकुटी खाए । खाइसकेर सुकराम र अविनाश पर्साढापस्थित घर जाने भन्दै हिँडे । चिसोका कारण डम्म हुस्सु लागिसकेको थियो ।
नयाँ बन्दै गरेको घर थियो । झ्याल थिएन । दीपेन्द्रले उनीहरुलाई देखे । दीपेन्द्र एक्कासी त्यहाँ पुगेर अविनाशलाई समातेर कु’ट’पि’ट गर्न थाले ।
कु’ट’पि’ट गरेको खबर गाउँभरी फैलियो । अनि यमकुमार, विनोद, विजय पनि पुगे र सबै मिलेर नि’र्घा’त कु’ट’पि’ट गरे । ‘कु’ट’पि’ट’कै क्रममा अविनाशको निधन भयो ।
यो पनि पढ्नुहोस : कार्यालयबाट विदा पाउन विरामी भएको बहाना गर्ने सबैभन्दा धेरै
– बेलायतमा विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरुले आफ्ना हाकिमसँग विरामी भएको बहानामा छुट्टी लिने गरेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ।हरेक पाँच जनामा दुई जना कर्मचारीले यस्तो गर्ने गरेको सर्वेक्षणमा देखिएको हो। बीबीसीले गरेको सर्वेक्षणमा कर्मचारीहरुले हाकिमसँग झुठो बोल्ने, चोरी गर्ने तथा अन्य कर्मचारीले गरेको कामको श्रेय लिने गरेको स्वीकार गरेका छन्।
बेलायतको अफिस फर नेशनल स्टाटिटिक्सका अनुसार एक कर्मचारीले वर्षमा लगभग चार दिन विरामी विदा लिन्छन्। सन् २०१८ मा कार्यालय नआउनका लागि कर्मचारीले सामान्य रुघा खोकी, ढाड दुख्ने तथा मानसिक तनावलाई बढी बाहना बनाएको पाइएको छ।
यसमा पनि जुनियर कर्मचारी सिनियरको तुलनामा बढी झूठो बोल्ने गरेको पाइएको छ।
एक मनोवैज्ञानिक हेले लुईसका अनुसार प्रायः कर्मचारीहरुले आफूलाई आराम चाहिएको कुरा हाकिमलाई जानकारी गराउन विरामी भएको बताउने गरेका थिए।
यदि उनीहरुको हाकिमसँगको सम्बन्ध खराब भएमा थोरै मात्र साँचो कुरा बोल्छन्। लुइसका अनुसार कर्मचारीहरु कुनै कम्पनी छोडेर गएमा उनीहरुले कम्पनी भन्दा पनि आफ्नो हाकिमलाई छोडेको महशुस गर्छन्। कर्मचारी सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने उनीहरुको हाकिमको राम्रो वा खराब व्यवहारसँग हो।